Paosin-dra eny amin’ny HJRA Tsy maharaka ny filàn’ny marary sy ireo tra-doza intsony
Hopitaly HJRA Ampefiloha Tsy handoavam-bola ny fandidiana ny marary
Nitondra fanazavana manokana mikasika ny fandidiana ireo marary eo anivon’ny hopitaly HJRA Ampefiloha ny faran’ny herinandro teo ny profesora Rakoto Alson Olivat.
Tsy maharaka ny filàn’ireo marary sy ireo mila fandidiana maika intsony ny tahirin-drà etsy amin’ny « Centre national de transfusion sanguine » etsy amin’ny hôpitaly HJRA Ampefiloha amin’izao raha ny fantatra.
Noho ny fihenan’ireo mpanome rà maimaim-poana no antony mahatonga izany, nefa ny filàna tsy mitsaha-miakatra isan’andro. Raha tsiahivina tokoa mantsy dia mahatratra 35.000 isan-taona ny paosin-drà ilaintsika manerana ny Nosy ka ny 20.000 paosy amin’ireo dia lany eto Antananarivo avokoa. Hamonjena ireo vehivavy saro-piterahana ka very rà be loatra, ireo ankizy lasibatry ny aretina homamiadana ary koa ireo tratry ny lozam-pifamoivoizana no tena handaniana izany 20.000 paosy izany raha manodidina ny 120 paosy isan’andro kosa ny filàna raha kely. Miantso ireo tsara sitra-po rehetra vonona hanome rà hanavotana ny ain’ny mpiara-belona araka izany ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny CNTS mba ho avy hanatona azy ireo. Olona ampy taona izany hoe : 18 ka hatramin’ny 60 taona no ilaina amin’izany, ampy torimaso tsara, milanja 50 kg raha kely indrindra tsy misy aretina mitaiza ary avy nisakafo ara-dalàna. Tsy afaka manome rà kosa ny vehivavy tonga fadim-bolana na mampinono.